5 ezigbo ụlọ oriri na ọ biụ biụ na Tokyo | Akụkọ Njem
5 ezigbo ụlọ oriri na ọreụ biụ na Tokyo
Tokio ọ bụ oge a, agile, ike obodo, na a ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ na-abịa ma na-aga mgbe niile n'ebe niile na ọtụtụ puku, ọtụtụ puku cafes, Ogwe na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ .ụ. Ọ dịghị okporo ámá nke ị na-adịghị ahụ ebe ị ga-eri ma ọ bụ drinkụọ ihe ọ ,ụ ,ụ, n'agbanyeghị obere. Ndị Japan na-eri ihe ma na-a drinkụ n'èzí kwa ụbọchị n'izu ma gị onwe gị, dịka ndị njem nleta, mee otu ihe ahụ.
Tokyo nwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọ withụ withụ na Michelin kpakpando n'ihi na gastronomy bụ ihe magburu onwe ya ma ọ nwekwara ebe pụrụ iche na ebe ụfọdụ maka ihe ndị ọzọ. Ọdịbendị ndị Japan na-ewu ewu dị mma maka ihe niile ya mere ebe a bụ ndepụta nke ụlọ oriri na ọ biụ fiveụ ise mara ezigbo mma na Tokyo. Site na vampires ka nrọ hallucinogenic na ninjas, robots na Alice na Wonderland.
1 Alice na ụlọ oriri na ọ Labụ Labụ Labyrinth
3 Jalọ oriri na ọ Ninụ Ninụ Ninja Akasaka
4 Kọfị Kawaii Monster
5 Kafe Vampire
Alice na ụlọ oriri na ọ Labụ Labụ Labyrinth
Ọ bụrụ na akụkọ Lewis Carroll na-amasị gị, nke a bụ ebe dị mma ị ga-aga maka mmanya na obere nri. Ọ bụ agbata obi nke Ginza, otu n'ime ọnụ ahịa kachasị oke ọnụ na naanị na isi obodo Japan, mana echela na ha ga-ewepụ isi gị maka ị aụ mmanya. Gbakọọ nkezi ego 40 euro maka nri ndị Italiantali.
A na-emeghe ebe a site na Mọnde ruo Fraịdee site na mgbede 5 ruo elekere 11.30 na ngwụsị izu na ezumike ọ na-emepe ụtụtụ maka kọfị, site na 11: 30 ruo 3pm na ọzọ n'etiti 4 ruo 11: 30 pm. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ ebe dị oke egwu ma site na mgbe ị bịarutere ị gafere a Okpokoro ejiri mpempe akwụkwọ Alice dee ya na ihe atụ mbụ. N'ime tebụl bụ kaadị, enwere ihe edebere nke bu ibu teacup na umuaka yi uwe dika Alicia.
Dị ka ọ dị na mbụ, ngosi efere dị mma. Rutere na ụzọ ụgbọ oloko, na-apụ na ọdụ Ginza n'otu uzo ahụ, nke dị naanị ije ije nkeji ise, ma ọ bụ site na iji akara JR Yamanote wee pụọ na Shimbashi. Ọ na-arụ ọrụ n'ime yolọ Taiyo, 5F 8-8-5. Nabata kaadị akwụmụgwọ!
Onye ọ bụla gara Tokyo maara na ọ siri ike ịchọta ụlọ ụka na obodo ahụ. Ọ bụghị na enweghị, doro anya, mana mgbe ị si mba ndị Kraịst bịa, a na-eme gị ụka na ụlọ ụka ebe niile. Ihe oyiyi nke Kraist bu otu odida obodo, ya mere o jiri masiri m ileta ndi ozo. Ghọtara na ịhazi ụwa na okwu Ndị Kraịst anaghị adị mkpa mgbe niile.
Ka o sina dị, na Tokyo ị nwere ike ịga na nke a kafe a na-eji ejiji ndị Kraịst chọọ ya mmaOriọna kandụl nke nwere kandụl, ákwà mgbochi velvet, uko ụlọ a na-awụlikwa elu, ogwe osisi mabụl, ebe ịchụàjà ndị na-egbu maramara, windo ndị tụrụ àgwà, ihe akpụrụ akpụ nke Kraịst na Nwanyị Mary na ụdị chọọchị ahụ mma. Ha niile nwere a uzo nke ịghasa kwupụta gothic E nwere, akpati ozu, akpati ozu, akụkụ na-egbu egbu na menu nwere aha ndị nwere aha na-ejikọ okpukpe na ụjọ.
E nwere ihe ọzọ Christon Café na Osaka, ọ bụ nke mbụ ahụ, mana ọ ghọrọ nke ewu ewu na taa enwerekwa Shibuya na nke Shinjuku. I nwere nke abụọ ịhọrọ! Companylọ ọrụ na-ahụ maka kọfị ahụ kwuru na ihe ị hụrụ si Europe na Latin America bute ya mana ọ nwere ike bụrụ Emebere na china. Ka o sina dị, gịnị ka ị ga-ahụ mụ agbọghọ na-eji ejiji gothic lolita ọ bụrụkwa abalị abali ọ na-aghọ ụlọ ịgba egwu.
Adreesị Shinjuku bụ Sankocho Heim, 5-17-13, 8-9F. Ọ na-emepe site na mgbede 5 nke mgbede.
Jalọ oriri na ọ Ninụ Ninụ Ninja Akasaka
Ninjas na Japan, otu obi. Saịtị a na-eje ozi ọ na-eri naanị nri ma na-eme ihe ngosi ninja n'ihi ya, ọ nwere ike ghọọ a pụrụ iche na fun n'abalị. N'ime ya bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ withụ nke nwere osisi na okwute, n'ụdị nke mgbe ochie Japan. Ndị ninjas na-ewere iwu gị wee wetara gị ya, na-agbachi nkịtị na-apụta ma na-apụ n'anya dị ka a ga-asị na ha nọ na otu ọrụ nzuzo ndị ahụ ha bụ ndị protagonists. Ha na ụfọdụ ndị na-erikwa ndị na-eri nri mma agha ma ọ bụ karat egosi.
Gastroronomy nke ebe a bu nke oge a mana oge ijere ya ozi bu ihe n’eme ya nma n’ihi na ninja-odibo ọ dị oke egwu. O nwere ike ịbụ na nri ahụ na-echetara gị kpakpando ninja ma ọ bụ na anwụrụ ọkụ anwụrụ ọkụ bụ ejula ndị ị rịọrọ… Nnukwu obi ụtọ! Saịtị a dị na Nagata-cho, na Akasaka Tokyu Plaza, 1F. Ọ na-emepe na Mọnde ruo Satọdee site na mgbede 5 mana ọnụ ụzọ na-emechi na 10: 30, ọ bụ ezie na ndị mmadụ nwere ike ịnọ ruo etiti abalị.
Na-abịa site na ịga ije naanị nkeji atọ site na ọdụ Ginza Line ma ọ bụ site na Marunouchi, ọdụ Akasakamitsuke. Site na weebụsaịtị ha ị nwere ike ide akwukwo.
Kọfị Kawaii Monster
La omenala kawaii etinyewo ya n’elu ụwa nile. Ọ bụrụ na South Korea na-ebupụ k-pop, ọdịbendị Japanese nke kawaii nwere otu ike ahụ. Themụ agbọghọ nke ụwa dum makwara mma! Lee Tokyo ị nwere nke a ụlọ oriri na ọfeụ andụ na cafe Nnukwu Crazy.
Ọ dị ka nrọ LSD. Ọ bụrụ na ị banye na nkume, Chukwu m! Ọ bụ maka saịtị ahụ super quirky na yi nke ndị Sebastian Masuda haziri na Harajuku agbata obi, ebe ọzọ? Nwoke a nwere ụlọ ahịa nke ghọrọ ezigbo ewu ewu, 6% Dokidoki, wee mechaa sonye na pop star Kyary Pamyu Pamyu iji mepee cafe ya na Shibuya: Kawaii Monster Café. Na-amaja?
Enter banye na cafe ahụ site n'ọnụ ọnụ anụ ọhịa nwere nnukwu anya gaa ebe Nnukwu ihe egwuregwu, cupcakes ma na-atọ ụtọ n'ebe niile. Ebe ahụ kewara ya na ngalaba anọ: na Milk Guzosie nwere unicorn, ụnyasị na ihe ndọba oriọna na karama ụmụaka; na Mushroom Disco bụ nnọọ psychedelic nwere nnukwu multi-acha ero, Sala Mel-tii nwere ogidi nke macaroni na Ogwe Ule na-eje ozi cocktails nke dị ka ihe si na mmanya na Venus.
Ndị ọrụ ahụ anọghịkwa n'azụ na ejiji ha na omume ha ka i wee nwee Dolly, Baby, Crazy, Candy na cyborg sexy aha ya bụ Nasty. Gastroronomy jupụtara na agba agba oriri. Ọ bụ na YM Square, 4F.
Latestlọ oriri na ọ /ụ /ụ / cafe anyị kachasị ọhụrụ na Tokyo na-agbaso ọdịnala vampire. Ọ bụ a ebe gbara ọchịchịrị, uhie na velvet ojii, okpokoro isi, coffins nwere chandeliers na-enwu gbaa na ikuku mara mma nke ukwuu.
Ndị ọrụ na-eyi tuxedos na ụmụ agbọghọ na-eyi uwe ndị France. Ọ bụ saịtị zuru ezu nke mere na ebe a ka ha tinyela batrị na ịmegharị ụdị akwụkwọ vampire. Dị ka à ga - asị na ị mikpuru gị kpam kpam na mbara igwe nke Bram Stocker na Dracula ya. Undsda Egwu Baroque na menu abụghị nke na-akụ ụda ka ị wee nwee ike ịtụ ụfọdụ ọgịrịga nwụrụ anwụ a la Van Helsing, kuki olili ozu Dracula esiri n'ọkụ nke ndị mmadụ ma ọ bụ ihe ọ vanụ vanụ vanilla ahụ nwere ọbara ọgbụgba ...
Lọ oriri na ọeterụeterụ ahụ bụ otu otu Chrison Café na Alicia. Saịtị a dị na mpaghara Ginza, na Lapeville 7F.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Tokio » 5 ezigbo ụlọ oriri na ọreụ biụ na Tokyo
10 German obodo maka njem na-adọrọ mmasị
Atụmatụ 8 iji chọta ụlọ nkwari akụ zuru oke